China feed Bar mveliso kunye nabathengisi | Yoqobo
Sineendidi ezinkulu nezahlukeneyo zebha yoKondla, kubandakanya ibha ye-CZ yokutya, ibha yokutya ye-VF, ibha ye-AZ yokutya, ibha yokutya ye-FD, ibha yokutya ye-VT, ibha yokutya ye-VG, ibha yokutya ye-VC, ibha ye-VE yokutya, i-feed bar ye-SCM415, emva Ukubhabha nokucima, ukuqina kwe-HV> 650, ngokuxhathisa okuphezulu kunye nokuqina ngaphakathi, isicaba sesakhelo ngasinye kufuneka silawulwe ngaphakathi kwe-0.01mm, kwaye uburhabaxa bomhlaba kufuneka bulawulwe ngaphakathi kwe-RA0.2. ingxubevange yobhedu enomthamo wokugcina ioyile eqinisekisa ukuthambisa okungcono kwezinto zethu zebar zokutya kwisantya esiphezulu. Ibha yesondlo kunye nesilayida nayo iyahambelana-ukuya-kwenye ukuqinisekisa ukucocwa okuphezulu kunye nendawo yokunxibelelana ephezulu. Ibha yethu yokutya ifana ncam neyasekuqaleni yeYamato.Ngokongeza, sinokubonelela ngeShing Ray 787 kunye ne-720 bar feed feed, zombini ezo zikumgangatho wokuqala.
I-Original accessoreis Co., Ltd inokubonelela abathengi ngaphezulu kwe-90% yezincedisi zoqobo zohlobo lweYamato, kunye nazo zonke izixhobo eziqhelekileyo. Umphathi iminyaka eli-12, kwaye uyiqonda kakuhle yonke inkqubo yokuthunga inkqubo eTshayina, kwaye unokubonelela abathengi ngamacandelo oqobo oomatshini bokuthunga abahlukeneyo abenziwe eChina. ., Ltd.Yenye i-brand accessoreis ngaphandle kwezixhobo zeYamato, abathengi abafuna isixa esikhulu kunye nezincedisi zoqobo banokudibana nenkampani yethu.
Sinamalungelo okungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kwaye sinokubonelela abathengi ngenkonzo yokumisa kwangaxeshanye, kwangaxeshanye, ukuze kuqinisekiswe "umgangatho wethu wokuqala", sixhotyiswe ngezixhobo zovavanyo olupheleleyo kunye nabahloli abanamava. Umgangatho bubomi bethu, kwaye sihlala sihambelana nawo.I-NingBo Original Accessories Co., Ltd efanelekileyo kukwakha uphawu lodidi lwehlabathi lwezinto zokuqala. Sinethemba lokwazi abathengi abasisiphelo esiphezulu kunye namaqabane kwihlabathi liphela ukwenza ikhonkco lokuqala lokuthunga izixhobo zeshishini.
Egqithileyo I-K2 SUCTION PIPE 6201022-yoqobo
Okulandelayo: ISIKHOKELO ESIPHAKAMILEYO NGOKUPHELELEYO
Izixhobo Zokuthunga Imizi-mveliso
Amashishini okuthunga amashishini
Umboneleli weCandelo leYamato
ILooper, isitya seStich kunye nenja yokutya